La pépinière d’Antsirabe vahaolana ho an’ny tontolo iainana. - Madagascar Informations
La pépinière d’Antsirabe vahaolana ho an’ny tontolo iainana.
12 novembre 2016 14 novembre 2016 Madagascar Informations Aucun commentaire
Manomboka mahaliana olona ny fikoloana ny tontolo iainana. Ny « La pépinière de la Manie » izay lasa « La pépinière d’Antsirabe » ankehitriny dia monome fahafam-po antsika hitia zava-maniry. Mizara roa mazava tsara ny tolotra omen’ny La pepiniere d’Antsirabe : eo ny fihompiana tantely ary ny momba ny zava-maniry.
Hazo fihinam-boa maro samihafa no hita eto amin’ny fampiratiana toy ny voasary, ny manga, ny paiso sy ny sisa ary ireo vokatra maro samihafa izay entina eto Madagasikara. Hita miavaka eto ny fisian’ity Main de Bouddha ity. Eo iany koa ireo vonikazo maro karazany sy hazo fanao haingo trano izay tena mahasarika olona.
← GRAND DOSSIER BEALALANA: Un problème environnemental de 250 km2
Manaparitaka ny fambolena natoraly ny AGRINATURE. →
Célébration de la Journée Météorologique
26 mars 2018 Madagascar Informations 0
14 novembre 2016 Madagascar Informations 0